SAWIRRO:-RW Rooble oo Deg-deg ku Booqday Injineero Turki ah oo la qarxiyay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ku booqday isbitaalka Erdogan ee Muqdisho dhaawacyada howlwadeennadii ka shaqeynayay dhismaha waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye ee argagixisadu ay qaraxa la beegsadeen ayaa tilmaamay sida ay uga go’an tahay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdoodaba in ay dhistaan dalka, kana xoreeyaan argagixisada.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa mid mid u dul istaagay howlwadeennadan ku dhaawacmay iyagoo ka shaqeynaya horumarinta dalka, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen Injineerro u dhashay dalka aan walaalaha nahay ee Turkiga.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaaraha ayaa u mahadceliyay dowladda iyo shacabka Turkiga sida ay uga dhiirran yihiin garabsiinta walaalahooda Soomaaliyeed oo cadowga argagixisada ah ay u bartilmaamsadeen dadaalka dib u dhiska ah ee ay ka wadaan dalka.
Dalal qaabilay Qaxootigii ugu badnaa sanadkii tegay ee 2020 oo la shaaciyay